Kodwa | Eyedwarha 2021
Izinto ezili-17 onokuzigcina engqondweni ukuba uyafuna ukubethelela intombazana ngezibhalo
Kwezi ntsuku abantu bahlala beqhagamshela omnye komnye ngeetekisi. Ke ukuba wena (funda: amadoda) unxibelelana nabasetyhini ngemiyalezo ebhaliweyo, nazi ke ezinye iingcebiso kuwe. Ezi ngcebiso ziya kukunceda ekugcineni ubudlelwane bakho buhamba phambili.
I-Netaji Subhas Chandra Bose ye-125 yokuzalwa kwesikhumbuzo: ii-Quotes ezili-10 ezikhuthazayo
UNetaji Subhas Chandra Boses isiqubulo esidumileyo esithi, 'Tum mujhe khoon do, mai tumhe azadi dunga' kukhuthaze izigidi ukuba zilwele inkululeko ye-India. Wazalwa nge-23 kaJanuwari ngo-1897. Ke ngoko, kwisikhumbuzo sokuzalwa kwakhe, siye saqulunqa ezinye zeengcaphuno zakhe ezikhuthazayo.
Isikhumbuzo sokuzalwa kukaRamdhari Singh Dinkar: Iinyani malunga neMbongi eyaziwayo, i-Essayist kunye noGxeki loncwadi
URamdhari Singh Dinkar, odume ngegama lakhe lokuloba uDinkar, wayeyimbongi yaseIndiya, umgxeki kwezoncwadi, ilungu likaRajya Sabha kunye nombhali wezincoko. Ngomhla wokuzalwa kwakhe, silapha sinolwazi oluncinci ngaye.
Isikhumbuzo sokuzalwa kunye nokufa kukaWilliam Shakespeare: Ezinye iinyani malunga nembongi kunye nomdlali odlalayo
UWilliam Shakespeare wayeyimbongi eyaziwayo yesiNgesi kunye nomdlali odlalayo. Wazalwa ngo-Epreli 1564 kwaye wasweleka nge-23 ka-Epreli 1616. Nangona umhla wokuzalwa kwakhe ungaziwa, wabhaptizwa nge-26 ka-Epreli 1564. Funda ezinye iinyani ezinxulumene nobomi bakhe.
Usuku lokuzalwa lukaShirdi Sai Baba: Iinyani ezinomdla malunga neNgcwele yamaHindu namaSilamsi
UShirdi Sai Baba onqulwa ngamaHindu namaSilamsi kwathiwa wazalwa ngomhla wama-28 kweyoMsintsi ngo-1838. Ngomhla wokuzalwa kwakhe, silapha sinezinto ezingaziwayo kangako malunga nengcwele yamaHindu namaSilamsi.
UMphathiswa weManyano uRam Vilas Paswan Usweleke eneminyaka eyi-74: Yazi malunga 'neNkokheli yeDalit ende'
Umphathiswa weManyano uRam Vilas Paswan uphefumle okokugqibela nge-8 ka-Okthobha ka-2020 eneminyaka eyi-74. Wayenengxaki yokugula ixesha elide kwaye wenziwa utyando lwentliziyo kwiintsuku ezine ezidlulileyo ngeCawa. Nazi iinyani malunga naye.
Usuku lwaMadoda lwaMazwe ngaMazwe 2020: iikowuti, iminqweno nemiyalezo yokwabelana ngale mini
Qho ngonyaka uSuku lwaMadoda lwaMazwe ngaMazwe lujongwa nge-19 kaNovemba. Umhla uyaqwalaselwa ukwamkela indima edlalwa ngamadoda kuluntu lwethu. Ukuze uvakalise umbulelo wakho kumadoda akujikelezileyo, nazi ezinye zeekowuti kunye neminqweno onokuthi wabelane ngayo.
Isikhumbuzo sokuzalwa sikaBharatendu Harishchandra: Yazi malunga noBawo weeNcwadi zaseHindi kunye neTheatre
UBharatendu Harishchandra wayeyimbongi eyaziwayo yase-Hindi kunye nombhali owanikezela ngomkhombandlela omtsha kuncwadi nakwimidlalo yeqonga. Ngomhla wokuzalwa kwakhe, okt nge-9 Septemba, nazi iinyani ezingaziwayo ngaye.
Isikhumbuzo sokuzalwa kukaRabindranath Tagore: Iinyani ezithile malunga neMbongi edumileyo yaseBengali kunye neNoveli
URabindranath Tagore, imbongi edumileyo, umbhali, imvumi kunye nomculi wazalwa ngomhla we-7 kuCanzibe ngo-1861. Wayekwangowokuqala engengowaseYurophu ukuphumelela uNobel Prize kuLwazi loncwadi. Ngomhla wokuzalwa kwakhe, size nezinto ezithile ngaye.
Iingcebiso ze-8 ze-Foreplay zaMadoda zokuba Ubomi boBomi obuBhetele
Ukwabelana ngesondo yenye yeendlela eziphambili apho isibini sivakalisa uthando lwaso omnye komnye kwaye isini esilungileyo singaphelelanga ngaphandle kokubonisa kwangaphambili. Ukuba ucinga ukuba i-foreplay imalunga nokuphuza nokuphatha nje ezinye zezinto ezinomdla ngayo.
Iingcebiso ezili-10 zesini emadodeni afuna ukuba ngolungileyo ebhedini!
Ukwabelana ngesondo yenye yeendlela ezininzi ezithi izibini zibonise uthando ngazo. Amanye amadoda ahlala exhalabele into enye nokuba alungile na ebhedini kunye namaqabane abo. Jonga iingcebiso ezili-10 zesini ezinomdla emadodeni.
Isikhumbuzo sokuzalwa kukaDadabhai Naoroji: Iinyani malunga 'noMmeli osemthethweni waseIndiya'
UDadabhai Naoroji, okwabizwa ngokuba yi-'Nxusa elisemthethweni lase-India 'wazalwa ngomhla we-4 kweyoMsintsi ngo-1825. Kubo bonke ubomi bakhe, wayesebenzela ukuphuculwa kwelizwe kwaye wayengowokuqala wase-Asia ukuba lilungu lase-Bhritane kwi-UK House of Commons.
USardar Ajit Singh: Umlo wenkululeko owafa Ngomhla i-India yafumana inkululeko
USardar Ajit Singh wayengumntakwabo Sardar Kishan Singh kunye nomalume kaShaheed Bhagat Singh. Wazalwa nge-23 kaFebruwari ngo-1881, waphefumla okokugqibela mhla i-India yabhengezwa njengesizwe esizimeleyo. Nazi ezinye iinyani ngaye.
Isikhumbuzo sokuzalwa kukaSivananda Saraswati: Iinyaniso ezingaziwayo ngaye
USivananda Saraswati wayengumxhasi weYoga kunye neVedanta. Ngomhla wokuzalwa kwakhe, okt nge-8 Septemba 2020, silapha ukukuxelela iinyani ezingaziwayo malunga neSwami Sivananda. Funda inqaku elingezantsi ukuze wazi ngakumbi.
Isikhumbuzo sokuzalwa sikaVinoba Bhave: Iinyaniso ezingaziwayo ngaye
UVinoba Bhave owazalwa njengoVinayaka Narahari wayengumlandeli okhutheleyo kaMahatma Gandhi. Uzalelwe i-11 ngoSeptemba 1895, uyaziwa ngokuba yi-'Bhoodan Movement '. Ngomhla wokuzalwa kwakhe, silapha ukuze sikuxelele ngaye.
Usuku lokuzalwa olumnandi Ratan Tata: Yazi iinyani ezinomdla malunga nosomashishini
URatan Tata ugqiba iminyaka engama-83 ngomhla wama-28 kweyoMnga yowama-2020. Uzalelwe kusapho oludumileyo, u-JRD Tata wabhengeza ukuba ngu-Ratan Tata njengendlalifa yakhe ngonyaka ka-1991. Yazi ezinye iinyani ezinxulumene neli gqala lishishini.
Isikhumbuzo sokuzalwa kukaSarat Chandra Chattopadhyay: Iinyani malunga neNoveli yaseBangali eyaziwayo
USarat Chandra Chattopadhyay wayengumlobi waseBangali kunye nomlobi owabhala ezinye zeencwadana zexesha lonke. Wazalwa nge-15 kaSeptemba 1876, wayeyinkwenkwe efundayo kunye nothando olunomdla ebuntwaneni bakhe. Nazi iinyani ezingakumbi ngaye.
Usuku lwaMadoda lwaMazwe ngaMazwe ngo-2020: Imbali, umxholo kunye nokuBaluleka kolu suku
USuku lwaMadoda lwaMazwe ngaMazwe ngumsitho wonyaka obhiyozelwa ngomhla we-19 kweyeNkanga rhoqo ngonyaka. Umxholo woSuku lwaMadoda lwaMazwe ngaMazwe lwe-2020 uthi 'Impilo ebhetele yamadoda nabafana'. Namhlanje silapha ukuze sikuxelele ngakumbi ngalo mhla. Funda uqhubeke
UMaharana Pratap Jayanti: Iinyani ezili-16 ezincinci ezaziwayo malunga ne-Great Rajput King
IMaharana Pratap ithathwa njengenye yeenkosi ezomeleleyo ezakhe zalawula kumhlaba wase-India. Nguye ongazange azinikele ku-Mughal Emperor Akbar, ngaphandle kobunzima kunye nokuzabalaza. Namhlanje sizise iinyani ngaye.
UGqr APJ Abdul Kalam Isikhumbuzo sokufa kwesi-5: Iinyani malunga noMntu oMissile wase-India
UGqr APJ Abdul Kalam, owayesakuba nguMongameli wase-India wazalwa nge-15 ka-Okthobha u-1931 kwaye wasweleka nge-27 kaJulayi 2015 ngelixa esenza intetho kwi-IIM Shillong. Ngomhla wokuzalwa kwakhe wesi-5, nazi iinyani ezinxulumene naye.
Uyenza njani intlama ye-raj kachori
uqikelelo lomtshato ngomhla wokuzalwa
imvume kunye neelayisensi ezifunekayo ukwenza i-pickles e-india
Izibonelelo zokutya ibanana kunye nobisi
Iphakethe yobuso beetroot yokugcoba ulusu
Ungalonyusa njani inani lobudoda kunye nokuhamba ngokutya
ujongeka kanjani mncinci kwiifoto